Madxweynaha Somaliland Oo Tacsi U Diray Abwaan Af-gudhiye Oo Geeriyooday | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargaysa (SDWO): Madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tacsi u diray ALLE ha u naxariistee Marxuum Abwaan Axmed Siciid Diiriye (Af-gudhiye) oo xalay ku geeriyooday magaaladda Hargaysa.
Iyadoo marxuumka maanta lagu aasay magaaladda Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
Sida lagu sheegay qoraal taciya oo ka soo baxay xarunta madaxweynaha oo soo gaadhay shebekadda wararka ee SDWO, ayaa madaxweynuhu marxuumka ku sifeeyey Abwaan suugaan yahan ah caan ka ahaa dhamaan geyiga Soomaalidu degto, door muhiimana ku lahaa nabadayntii, dib u heshiisiintii iyo dib u dhiskii dalka.
INAA LILAAHI WA INAA ILAAHU RAAJUCUUN
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa, ka dawladda iyo ka shacbiga Somaliland, waxa uu dhambaal tacsi ah u dirayaa, bah-weynta suugaanta iyo hal-abuurada, waxgaradka, waayeelka, aqoonyahanka.
Qoyskii, eheladii, qaraabadii, asxaabtii iyo shacbiga Somaliland ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Marxuum Abwaan Axmed Siciid Diiriye (Afgudhiye) oo ku geeriyooday shalay oo ay taariikhdu tahay 27/10/2018, magaalada Hargeysa.
Madaxweynuhu waxa uu marxuumka ku sifeeyey Abwaan suugaan yahan ah oo caanka ahaa dhamaan geyiga Soomaalidu degto, door muhiimana ku lahaa nabadayntii, dib u heshiisiintii iyo dib u dhiskii dalka.
Waxaanu Madaxweynuhu marxuumka Alle uga baryayaa inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo bahda suugaanta iyo hal-abuurada, waxgaradka, waayeelka, aqoonyahanka, qoyskii, eheladii, qaraabadii, asxaabtii iyo shacbiga Somaliland ee uu ka baxayna Samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo.